Ganacsiga Bosaso oo maanta Xiran iyo Ciidamo magaalada gaaf wareegaya – Puntland Post
Posted on November 29, 2017 November 29, 2017 by Cabdiqani Boos
Ganacsiga Bosaso oo maanta Xiran iyo Ciidamo magaalada gaaf wareegaya
Bosaso-[Punt;and Post] Xarumaha Ganacsi ee magaalada Boosaaso ayaa guud ahaan maanta xiran, xilli wali aysan isfaham gaarin ganacsatada iyo dawlada, waxaana magaalada ay maanta ku jirtaa jawi ka badalan midkii Ganacsi ee maalmihii tagay ay ku jirtay.
Shirkadaha waawayn iyo xarumaha ganacsi ee yar yar ayaa xiran, waxaana arrintan ay daba socotaa cabasho muddooyinkii ugu dambeeyay kasoo baxaysay ganacsatada, taasi oo ku aadanayd Khidmadaha Canshuur ee dawladu ay soo rogtay.
In badan oo kamid ah magaalada waxaa lagu arkayaa ciidamo gaaf wareegaya, gaar ahaan dariiqyada muhiimka ah si ay uga hortagaan in mudaharaadyo in ay dhacaan .
Dhinac kale Doonyihii iyo Maraakiibtii ku xirnaa dekadda Boosaaso ayaa ka shiraacdey halkaas waxaana ay baroosinka dhigteen meel aan ka fogeyn dekadda magaalada Bosaso ee xarunta gobalka Bari .
Wixii ka dambeeyay markii shirkadda P&O PORT ay la wareegtay maamulka dekeda Boosaaso, ayaa waxaa soo ifbxay cabasho xoog leh oo u dhaxaysa ganacsatada iyo dawlada, waxaana ugu wayn arrinta la isku khilaafsan yahay Khidmadaha Canshuur ee la qaadayo.